Unwu ala Kenya aburula mkpamkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké mmiri ozuzo Kenya bụ ọdachi okike
Oké ọkọchị na-adịwanye ogologo na ogologo oge. Ọ bụghịzị naanị enweghị mmiri, kama ọ bụ ọrịa na enweghị ike niile nke a na-ebute ndị mmadụ. Enwere ndị Kenya nde atọ na ọkara chọrọ enyemaka enyemaka n'ihi oke ọkọchị na-egbu mba ahụ.
Ọnọdụ dị na Kenya aghọọla ụkọ nri nke akụkọ ihe mere eme na East Africa. Kọ mmiri na-ebelata mmepụta nri ma na-ebute ọrịa.
Ọnọdụ dị na Kenya
E mere atụmatụ na nde mmadụ 22,9 enweghị nri na Somalia, South Sudan, Kenya, Ethiopia na ugwu ọwụwa anyanwụ Nigeria, dị ka UN si kwuo. Anyị ekwuola ebe a gbasara nkwupụta nke "ọdachi ndị na-emere onwe ha" nke gọọmentị Kenya mere na February 10. A na-ahụta ịmụrụ anya a dịka ọdachi, ebe ọ bụ na mba ahụ chọrọ enyemaka ndị ọzọ iji nwee ike belata nsogbu na ụkọ ya. Oké ọkọchị ugbu a metụtara iri abụọ na atọ nke ógbè 23 mejupụtara mba ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-emetụta ụmụ amaala yana anụ ụlọ na anụ ọhịa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụaka 344.000 na ihe karịrị 37.000 ụmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye nwa ara na-arịa nnukwu nsogbu na-esi n'erighị ihe na-edozi ahụ, ọ dịkwa ha mkpa ọgwụgwọ ngwa ngwa. Naanị site na Machị rue Mee ọnụ ọgụgụ ụmụaka nwere nnukwu erighị ihe na-edozi ahụ jiri 32% rịa elu. Olileanya na-ebelata maka ndị bi na ọdachi a. Oke mmiri ozuzo a na-atụ anya abịabeghị. Mmiri zoro n'etiti 50 na 75% dị ntakịrị karịa ka a tụrụ anya ya, na mmiri ozuzo ugbua ụkọ. Nke a na-ebute mmụba nke enweghị nchekwa nri na mba ahụ n'ihi ụkọ ihe ọkụkụ na ọnwụ nke anụ ụlọ.
Na mgbakwunye, a ka nwere ọnwa nke July na August nke mmiri ozuzo ga-adị ala karịa. Nke a na-abawanye site na mgbanwe ihu igwe, nke na-eme ka ike na ụkọ mmiri ozuzo na-abawanye ụba, ọ bụghịkwa n'ihi enweghị mmiri, mana maka nsogbu niile ewepụtara na ọ gụnyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Oké mmiri ozuzo Kenya bụ ọdachi okike
Gịnị bụ ajọ ifufe?
Mgbanwe ihu igwe nwere ike ime ka akụnụba buru ibu na US